असुरक्षित छन् छोरी मान्छेहरू - यात्रा सन्दर्भ - साप्ताहिक
असुरक्षित छन् छोरी मान्छेहरू
सिर्जनाको क्षेत्रमा लाग्ने उद्देश्य राख्ने युवा–युवतीका लागि काठमाडौंमा अवसरहरू बढेका छन् । साहित्य, कला, संगीत तथा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले दाल–भात पनि खान नपाउने स्थिति अब छैन । देशका अन्य भागमा स्थिति अहिले पनि बदलिएको छैन । तर, राजधानी सहरमा अवसरको खोजीमा आउनेहरूलाई सहरले सक्दो सहयोग गरेको छ । गुरुकुल नाटकघर बन्द भएको एउटा टीस सबैको मनमा छ । खास गरेर देशका बुद्धिजीवीहरूले निकै चित्त दुखाएका छन् ।
नयाँ परिस्थितिमा गुरुकुलको पुनरागमनका सम्भावना बढेका छन् । यस्तै सहरमा भएका शिल्पि, मण्डला, पुरानो घर र कुञ्जलगायतका रंगमञ्चले पनि विकासको गति समातेको बिश्वास गरिन्छ । गुरुकुलका गुरु सुनील पोखरेल ‘ज्ञ’ मा व्यस्त छन् । ‘ज्ञ’ मा नाट्यकला सिकेका थुप्रै कलाकार आफनो प्रतिभा देखाउने अवसर पर्खेर बसेका छन् ।
त्यस्तै अवसर पर्खिरहेकी छिन् अमृता दाहाल अर्थात् एमी दाहालले । उनी भन्छिन्, ‘मैले नाटकको प्रशिक्षण लिएकी हुँ सुनील पोखरेल सरबाट । उहाँभन्दा माथि नाटक सिकाउने मानिस अर्को को छ र ? मेरो विचारमा मैले उहाँबाट राम्रो कलाकारिताको ज्ञान पाएको छु ।
संखुवा–सभाकी एमीको रुचि नृत्यमा छ । उनी राम्रो नाच्छिन् । नृत्य र अभिनय कलालाई बिजनेसकै रूपमा अपनाउने आँटका साथ उनी यो क्षेत्रमा छिरेकी हुन् । नाटकको क्षेत्रमा समर नाइट्स र ड्रिममा उनले अभिनय गरिसकेकी छिन् । सिनेमाको फाँटमा ‘मेरो देश’ र ‘उफ यो मन’ मा उनको अभिनय रुचाइएको थियो । अमृता चाहन्छिन्, ‘राम्रो सिनेमा बनोस् ।’ उनी देशमा मनोरञ्जन र व्यापार मिश्रित सिनेमाको विकास होस् भन्ने चाहन्छिन् ।
भारतीय सिनेमा संसारका प्रसिद्ध कलाकार नाना पाटेकरको अभिनय कलाबाट प्रभावित छिन् एमी । हिरोइनमा दीपिका पादुकोण उनको च्वाइसमा पर्छिन् । सिनेमामा आमिर खानको दंगलमा उनको मन बसेको छ । नेपाली सिनेमामा राजेश हमाल उनको च्वाइसमा पर्छन् । उनले सानै उमेरदेखि राजेश हमाललाई ‘हिरो जस्तो लाग्ने मानिस’ का रूपमा हेरिन् । त्यसैले पनि होला, उनी राजेशबाट प्रभावित भइन् । भन्छिन्, ‘उनलाई टक्कर दिने अर्को नायक अहिलेसम्म देखिएन । उनी साँच्चै महा–नायक हुन नेपाली सिनेमाका ।’
नायिकाहरूमा उनलाई गौरी मल्ल र निरुता सिंह मन पर्छन् । त्यसो त अरू नायिका पनि छन् । ‘कसैको लुक्स राम्रो, कसैको अभिनय राम्रो, कसैको नृत्य राम्रो त कसैको डाइलग डेलिभरी राम्रो । छुट्याएर हेर्नै मिल्दैन ।’
अमृता नाटक र सिनेमाको क्षेत्रमा भैरहेको सुस्त विकासबाट सन्तुष्ट छैनन्, तर परिस्थिति बदलिँदै छ । अहिले मानिसहरूले नाटक मन पराउन थालेका छन् । नाटकका दर्शक बढेकाले नै नाटकघर सधैं हाउसफुल हुन्छन् । एक महिनादेखि पैंतालीस दिनसम्म नचलेका त कुनै नाटक नै नहोलान् । दर्शकहरूको राम्रो नाटकप्रतिको चाख र चाहनालाई हामी कलाकारहरूले पूरा गर्नुपर्छ । दयाहाङ राई र बिपिन कार्कीजस्ता कलाकार नाटककै मार्फत सिनेमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । ड्रामा गर्ने मानिसलाई सिनेमामा काम गर्न असहज पनि हुँदैन । सिनेमा खेल्न थालेपछि दयाहाङको अभिनयमा निकै ठूलो परिवर्तन आएको छ । उनले अभिनय गरेका सिनेमा हिट हुन थालेका छन् ।
एमीको अनुभवमा : पहिले पढाइमा कमजोर भएका, अरू क्षेत्रमा पनि कम क्षमता भएका मानिसहरू सिनेमामा आउँथे । अहिले त्यो परिस्थिति बदलिएको छ । अहिले यो क्षेत्रमा पढे–लेखेका मानिसहरू आउन थालेका छन् । क्षमता नभएका र मेहनत गर्न नसक्ने कलाकार शरीर र रूपका आधारमा मात्र सिनेमामा आउन सक्दैनन् । नेपाली सिनेमाको क्षेत्रमा पारिवारिक विरासत भन्ने केही छैन । भुवन केसीका छोरा अनमोल बाबुको नामले होइन, आफ्नै नृत्य र अभिनयले चलेका हुन् । सिनेमामा विवाद हुनुपर्छ, तर विवाद भन्ने कुरा भए पनि तनाव हुन्छ र नभए त झन् तनाव हुने नै भयो ।
अहिले नेपाली समाज तनावमा छ । महिलाहरूमाथि आक्रमण भैरहेको छ । छोरी मान्छेको अस्मितामाथिको यो चुनौतीका बारे एमीका आफ्नै धारणा छन् । उनी भन्छिन्– छोरी मान्छेले आफूलाई जति सुरक्षित देखाउन खोजे पनि असुरक्षित नै हुन्छन् । यस्तोमा हामीले
आफ्नो स्वतन्त्र व्यक्तित्वको संवद्र्धन कसरी गर्ने ? हामी छोरी मान्छे कसैले पनि म सुरक्षित छु भन्ने अवस्था छैन । त्यसैले हामी सतर्क हुनुपर्छ । अहिलेसम्म हाम्रो समाजको चरित्रको विकृत पाटो देखिएको छ । प्राय: धनी र प्रभावशाली परिवारका छोराहरू बलात्कारी पात्र हुन्छन् । त्यसैले ती बलात्कारी छुट्छन् । धन नभएकाहरू फस्छन् ।
हरेक नागरिकले आफनो काम स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाउनु एउटा सुविधा हो, तर हामी छोरी मानिसहरू त्यो सुविधाबाट वञ्चित छौं । जतासुकै, सार्वजनिक बसमा, भाडाका कारमा, सपिङ मलमा— एभ्री ह्वेर, एभ्री मोमेन्ट ।
प्रकाशित :कार्तिक १४, २०७५
अपराधको बदलिंदो प्रवृत्ति